Virtual Router – Wifi Hot Spot for Windows7/ 2008 R2 – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)
Published On: Sat, Jan 5th, 2013 ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲများ | By KiRk Virtual Router – Wifi Hot Spot for Windows7/ 2008 R2
ကဲလာပါပြီ…. ကွန်ပြူတာကနေ wifi ပြန်လွှင့်ပြီး ဖုန်တွေ Tablet တွေ နဲ့ တစ်ခြား
ကွန်ပြူတာတွေကို ဝိုင်ဖိုင်ပြန် မျှပြီး သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ…
လိုင်စင်ကီးမလိုပါဘူး…. freeware version ..Open Source base router လေးပါ…
စေတနာထက်သန်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Donate လုပ်သွားလို့ရပါတယ်…
သူကတော့ Lan line ကို ဝိုင်ဖိုင် ပြန်လွှင့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်… wifi to wifi မရပါဘူး….
လုံခြုံရေးလဲစိတ်ချရပါတယ်…WPA2 (the most secure wireless encryption.) အဖြစ်ထားလို့ရတယ်လေ…
client ဘယ်နှစ်လုံးလာရောက် ချိတ်ဆက်ထားသည်ကိုလဲ ပြသေးတယ်ဗျ…
အရင်ဆုံး Share Connection ဆိုတဲ့နေရာမှာ refresh လုပ်ပြီး….
NetworkName(SSID) ဆိုတဲ့နေရာမှာ နာမည်ထည့်…..
အောက်မှာ ကိုအသုံးပြုမဲ့ password ပေး….ပြီးရင် Start Virtual Router ကို ကလစ်လိုက်တနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါပြီ
အဲဒါကြောင့် ရုံးသုံးလူများ ၊ ကျောင်းသားများ ၊ စက်ရုံများမှာ windows PC မှတစ်ဆင့် wifi လေးများဖြင့် သာယာနိုင်ကြပါစေဗျာ…
Virtal Router ကို ဒီနေရာတွင်ဒေါင်းယူပါ…
KiRk - Related News
Windows 8 Start Button Insatller For Window 8 User
KaraWin Std (amyokaungtarr.com)3.9.0.0.rar (3.41 Mb)
17 comments on “Virtual Router – Wifi Hot Spot for Windows7/ 2008 R2”	kawaypyow on January 5, 2013 at 7:37 am said:
Software need DLL file missing. Not Ok to install.
Reply ↓	kawaypyow on January 5, 2013 at 7:39 am said:
I used Windows764bits. I think so.
Reply ↓	winnaing on January 5, 2013 at 9:36 am said:
Reply ↓	Kaung Myint Tun on January 6, 2013 at 9:35 am said:
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် အစ်ကိုတို့ရေ PCကနေပြီး WIFI ပြန်လွှင့်တာလိုချင်နေတာ ကြာပြီ။
Reply ↓	BOBO on January 6, 2013 at 12:31 pm said:
i PC ya phuu window7pae could not be start phit nae tal
Reply ↓	htin kyaw on January 6, 2013 at 2:30 pm said:
IDM6portablealoat ma phit per. Virus file per nay tel
Reply ↓	kolin on January 7, 2013 at 3:02 am said:
မရဘူးဗျို့ ရမ်းလို့ကိုမရတာ ဘာဖြစ်လို့လည်း
Reply ↓	zauk on January 9, 2013 at 2:44 pm said:
Pls U buy and use usb wireless adapter … can use two way AP and Client….
Reply ↓	htet arkar on January 10, 2013 at 3:54 am said:
refresh ကိုလုပ်လို့မရလို့ပါ ပြန်ပြင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး
Reply ↓	Zaw Lin Htet on January 17, 2013 at 10:06 am said:
You can try adhoc connection you normally use for windows to windows connection. OR you can use command prompt with admini priviledge in windows7and 8 (windows 8 remove adhoc connection). netsh wlan set hostednetwork ssid=”name” and enter. netsh wlan start hostednetwork and enter. You can now use wifi for file transfer. It is okay to me with web server enabled application.
Reply ↓	Pingback: HOW TO SHARE VPN CONNECTION OVER WIFI | Cell Phone Cases And Accessories
သူ၇ on January 20, 2013 at 4:31 am said:
အကိုရေ XP အတွက်လဲတင်ပေးပါနော်
Reply ↓	winkokochit on January 23, 2013 at 4:14 am said:
အကိုရေ အင်တာနက်ချိ်တ်ထားတဲ့ ဖုန်းတလုံးကနေ နောက်ဖုန်းတလုံးကို တွဲသုံးလို့ ရမရ သိချင်လို့ပါ
Reply ↓	Soe Min (Ngamyar) on January 24, 2013 at 11:49 pm said:
Reply ↓	mungkyawsoe on January 26, 2013 at 2:27 pm said:
ဖုန်းကနေကွန်ပျုတာpcမှာဝိုင်ဖိုင်လွတ်လို့ရလားသိချင်ပါတယ် saftwave ရှိရင်လည်းနင်ပေးပါ
Reply ↓	ko than on January 29, 2013 at 5:17 am said:
မရဘူးဗျို့ ရမ်းလို့ကိုမရတာ ဘာဖြစ်လို့လည်း .refresh ကိုလုပ်လို့မရလို့ပါ ပြန်ပြင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး.
Reply ↓	Ye Lin Aung on February 6, 2013 at 2:19 pm said:
အကိုရေ ADSL ကနေ ပြန်လွှင့်လို့ မရဘူးလားအကို.. refresh လုပ်လို့လဲ မရဘူး..
Share Connection မှာ Local Area Connection ပေါ်တယ်
ပြီးတော့ Start Virtual Router နှိပ်တာ Virtual Router Could Not Be Started! ဖြစ်နေပါတယ်.. တချက်လောက် အကြံပေးပါဦး..